Fedora 34 waxay qorsheyneysaa inay PipeWire u adeegsato codka halkii ay ka isticmaali laheyd PulseAudio | Laga soo bilaabo Linux
Soosaarayaasha Fedora waa la siidaayay dhawaan maxaa loogu nooca xiga ee Fedora 34, isbedel weyn ayaa la qorsheeyay waayo, dhammaan durdurrada codka laga bilaabo PulseAudio iyo JACK server dhawaaqa ku socota PipeWire.
Adeegsiga PipeWire kuu ogolaanayaa inaad siiso xirfado processing audio xirfadeed Daabacaadda caadiga ah ee desktop-ka, baabi'i kala-jajabinta oo midee kaabayaashaada maqalka ee codsiyada kala duwan.
Hadda, Fedora Workstation waxay isticmaashaa nidaamka asalka ah ee PulseAudio ka shaqeynta maqalka, iyo barnaamijyadu waxay u adeegsadaan maktabada macmiilka inay la falgalaan nidaamkan, isku qasaan oo ay maareeyaan durdurrada maqalka. Ka shaqeynta maqalka xirfadeed wuxuu adeegsadaa serverka codka JACK iyo maktabada macaamiisha laxiriirta.
Halkii laga isticmaali lahaa PulseAudio iyo JACK waxaa la soo jeediyay in la isticmaalo serverka warbaahinta PipeWire jiilka soo socda oo leh lakab wada shaqeyn ah oo ilaalin doona dhammaan macaamiisha PulseAudio iyo JACK ee jira iyo codsiyada kor u kaca kuna socda qaabka Flatpak.
Macaamiisha waayeelka ah ee adeegsanaya heerka hooseeya ee 'ALSA API', waxaa la rakibayaa qalab ALSA ah kaas oo toos u marinaya durdurrada maqalka si toos ah PipeWire. Dhammaan barnaamijyada ku saleysan PulseAudio iyo JACK waxay awoodi doonaan inay ku shaqeeyaan PipeWire, iyadoon loo baahnayn inay rakibaan PulseAudio iyo JACK.
Hindisahan ayaa ah in lagu badalo daemon-ka 'PulseAudio' iyada oo lagu shaqeynayo fulin ku habboon PipeWire-ku-saleysan. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan macaamiisha jira ee adeegsanaya Maktabadda Macmiilka ee PulseAudio ay sii wadi doonaan inay u shaqeeyaan sidii hore, iyo sidoo kale codsiyada loo diro Flatpak.
Dhamaan maqalka 'PRO' waxaa gacanta ku haya maktabada macmiilka 'JACK', oo lahadleysa serverka JACK. Soo jeedintan waxay rakibi doontaa maktabadda macmiilka JACK oo si toos ah ula hadlaysa PipeWire. Dhammaan codsiyada jiifka ah ee 'PRO audio Jack' ayaa markaa ka shaqeyn doona PipeWire.
Xusuusin ahaan, PipeWire wuxuu Kordhiyaa Awoodaha PulseAudio iyadoo lagu duubayo fiidiyoow, habsocodka maqalka oo qarsoon, iyo qaab nabadgelyo oo cusub gudbinta iyo xakamaynta marin u helka qalabka.
PipeWire sidoo kale waxay bixisaa awoodo lagu xakameeyo ilaha fiidiyowga sida qalabka qabashada fiidiyowga, kamaradaha webka, ama waxyaabaha ka soo baxa shaashadda soo saarida shaashadda. Mashruucu waa mid loo hoggaansamayo GNOME waxaana horeyba loogu adeegsaday Fedora Linux oo loogu talagalay baaritaanka iyo wadaagga shaashadda ee deegaanka ku saleysan Wayland.
PipeWire sidoo kale waxay u shaqeyn kartaa sidii server dhawaaq dhawaaq hooseeya oo leh shaqeeyn isku dhafan awooda PulseAudio iyo JACK, xitaa baahiyaha nidaamyada farsameynta dhawaqa xirfadeed ee PulseAudio aysan sheegan karin.
Sidoo kale, PipeWire waxay bixisaa qaab nabadgelyo oo hagaagsan Waxay awood u siineysaa xakamaynta marin u helka qalabka gaarka ah iyo durdur gaar ah waxayna sahleysaa marinka maqalka iyo fiidiyowga iyo ka soo qaadista weellada go'doonsan.
Qabashada iyo dib u maqalka maqalka iyo fiidiyowga oo leh dib u dhac yar.
Qalabka fiidiyowga iyo maqalka waqtiga-dhabta ah.
Naqshad dhismeedyo fara badan oo dun ah oo u oggolaanaya waxyaabaha la wadaagayo barnaamijyo badan. Maareynta iyo ka shaqeynta shaxanka sawirada ee loo yaqaan 'multimedia graphics' waxaa lagu sameeyaa habab kala duwan.
Habka farsamaynta ku saleysan naqshadeynta ee noodhadhka noocyo badan leh oo leh taageero loogu talagalay jawaab celinta iyo cusbooneysiinta sawirada atomiga.
Waxaa loo oggol yahay inuu isku xiro wadayaasha labadaba serverka iyo plugins-ka labadaba.
Iskuxirnaan hufan oo lagu heli karo durdurrada fiidiyowga iyadoo loo wareejinayo sharraxayaasha faylka iyo helitaanka codka iyada oo loo marayo kaydadka la wadaago
Awoodda looga baaraandegi karo xogta multimedia ee hanaan kasta.
Jiritaanka qalab loogu talagalay GStreamer si loo fududeeyo is dhexgalka codsiyada jira.
Taageerada deegaanka sanduuqa sanduuqa iyo Flatpak.
Taageerada loogu talagalay plugins-ka qaabka SPA (Simple Plugin API) iyo awooda lagu abuuri karo waxyaabo ku shaqeeya waqtiga dhabta ah.
Nidaam debecsan oo loogu talagalay isku dubaridka qaababka qaababka badan ee loo isticmaalo iyo qoondaynta kaydka.
Adeegsiga hal nidaam asalka ah si loo maro maqalka iyo muuqaalka. Awood u leh inuu u shaqeeyo sidii server cod ah, xarun si loo siiyo fiidiyoow codsiyada (tusaale ahaan, gnome-shell screencast API), iyo server si loo xakameeyo marin u helka qalabka qabashada fiidiyowga qalabka.
Ugu dambeyntii isbeddelka weli dib uma eegin Guddiga Fedira Injineernimada Fedora (FESCo), oo mas'uul ka ah horumarinta farsamada ee qeybinta Fedora.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Fedora 34 waxay qorsheyneysaa inay PipeWire u adeegsato codka halkii ay ka isticmaali laheyd PulseAudio